Waa maxay Etableringslots iyo Sida lagu doorto? | Somaliska
Waa maxay Etableringslots iyo Sida lagu doorto?
Ka dib markii qaabilaada dadka cusub lagu wareejiyay xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen) sanadkii 2010 ayaa waxay dowladu sidoo kale abuurtay mashruucyo kale oo lagu taageerayo dadkaas cusub.
Mashruucyadaas waxaa ka mid ah mashruuc loo yaqaan Etaberingslots ama lagu macneyn karo Hagayaasha Aasaaska oo waxqabadkoodu yahay in ay qofka cusub ka saacidaan waxyaabaha aasaaska ah ee uu baahanyahay marka uu sharciga qaato. Qaasatan hawsha Hagayaasha ayaa ah in ay qofka cusub ka saacidaan sidii uu wadanka shaqo uga heli lahaa taasoo loo marayo in la siiyo warbixinada muhiimka ah ee uu u baahanyahay iyo in lagu xiro shirkadaha shaqada bixiya.
Maadaama heerka waxbarashada ee Soomaalida cusub uu hooseeyo ayay Hagayaashu waxay inta badan qabtaan in ay qofka ka caawiyaan waxyaabaha nolosha la xiriira sida balamaha dhaqaatiirta, fasiraada warqadaha, diyaarinta CVga, iwm.
Mashruuca Etableringslots ayaa waxa uu sidoo kale shaqo u abuuray qaar badan oo ka tirsan soo galootiga maadaama ay shirkadaha Swedishka ah u baahanyihiin qof fahmaya dhaqanka iyo luuqada soo galootiga. Ama xitaa waxay soo galootigu laftoodu furtaan shirkado ka shaqeeya mashruucaan.
Qofka cusub ayaa dhinaca kale waxa uu xor u yahay in uu doorto cida u noqoneysa Etableringslots iyo xitaa in uu awood u leeyahay in uu iska badalo haddii uu ku qanci waayo midka uu horay u doortay. Shirkadaha Hagayaasha ayaan iyagu diidi karin qofkii soo doorta. Waxaana ku waajib ah in ay turjumaan u qabtaan haddii aysan ku hadlin qofka luuqadiisa.
Cida doonayso in ay abuurato shirkad ka shaqeysa mashruucaan ayaa u baahan in ay la xiriirto Arbetsförmedlingen oo iyagu go’aaminaya in qofka loo ogolaado iyo in kale.
Qofka ku nool magaalooyinkaan Falköping, Fagersta, Ludvika, Borlänge, Norrköping iyo Örebro ee doonaya in uu doorto shirkad Etableringslots ayaan ku soo dhaweynaynaa shirkada aan asxaabta nahay ee LIVEK.se
Asc mr jimcale iyo dhaman asxabta Waa arin wanaagsan waliba dan u ah somalida
waar jimcaale waan ku salamay sxb aad iyo aad ayaad u mahadsantahay intaa kadib walal waxaan ku waydiyay hal su aal dadkii aan waxba isu dhalin ee is qabay maxaa kiiskooda laga yeelay yacnii dadka aan caruurta haysan arinkaaa iga soo jawaab sxb waxii aad akhbaar ka hayso xaaskii aya iga maqan ee waad dareemi kartaa nin iskaabulo ah ee kaftan.com
magan xaaskaaga imooow dheh africa sweden waxba masooo wadaane hadii dadka jooga sweden aay usbuuc walba mudaharadi lahaayeen waaa la aqbali lahaa dhamaan somalida oo dhan lakin waxaa howshoodiii gabay dadka svarige joooga waa swedene
asc jimcaale waan kusalamey salaan kadib waxaan kuwey diiya hadaan sharci qaadan makaqey gelikaraa shaqa raadin masa mahadsanid
Somali, idinkoo arali ah waxan idiin sheegaya majirto cid wax kuu raadin karta oo aan ahayn naftaada marka ruux kastaa waa in uu isqiyasa oo uu firiya waxa uu yaqaano ama uu ku fiicanyahay amaba uu jecelyahay markaa isku day in aad kasalgaaro waayo wadanka markaynu imanaynay waxan u soo maray waddo dheer marka qofkasta wax yar ha isdhibo wuna gaari insha allahu !!!